true drugs /zu-ZA/tools-for-life/drugs/steps/why-people-take-drugs.html read 2 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/drugs_zu_ZA.jpg Izimpendulo Kwizidakamizwa
Zonke izidakamizwa empeleni ziwubuthi. Ubuthi yinto eyenza ukuthi abantu noma izilwane zigule noma zife uma bungena emizimbeni yabo. Noma kunjalo, obunye ubuthi bunamandla kakhulu kunobunye futhi bulimaza kakhulu impilo yomuntu.
Umphumela isidakamizwa esinawo uncike ekutheni umuntu uthatha ingxenye engakanani. Inani elincane lisebenza njengesivuseleli (sandisa umsebenzi wengxenye noma yezingxenye zomzimba). Inani elikhudlwana liyisiyaluyalu (sehlisa umsebenzi wengxenye noma yezingxenye zomzimba). Kepha uma ethatha inani elikhulu ngisho nangokwengeziwe, isidakamizwa siba ubuthi futhi singambulala.
Isibonelo, ikhofi iqukethe i-caffeine, okuyisidakamizwa. Izinkomishi ezimbili noma ezintathu zekhofi zivusa umuntu. Izinkomishi eziyishumi mhlawumbe bezizomlalisa, kepha izinkomishi eziyikhulu bezingambulala. Akuyona ingozi kangako, ngoba kuthatha okuningi kwayo ukuze ibe nomphumela. Ngakho ke yaziwa njengesivuseleli.
I-Arsenic isidakamizwa esiyingozi kakhulu kune-caffeine futhi yaziwa ngokuthi ubuthi. Kodwa inani elincane le-arsenic liyisivuseleli. Umthamo omkhulu wenza umuntu alale kanti izinhlamvu ezimbalwa zanele ukubulala umuntu.
Zonke izidakamizwa ke, zinomphumela omubi emzimbeni. Lowo mphumela ungaba mncane noma mkhulu. Kepha kunezidakamizwa eziningi ezidala ezinye izinkinga ngoba zinomphumela omubi engqondweni.
Ukuqonda ukuthi izidakamizwa ziwuthinta kanjani umqondo, kumele wazi okuthile ngokuthi iyini ingqondo nokuthi isebenza kanjani.
Ingqondo akubona ubuchopho. Ingqondo ileyo ngxenye yomzimba ngaphakathi ekhanda esebenzisa izinzwa ukuthumela imiyalo ezingxenyeni ezahlukene zomzimba.
Ingqondo yakho yilokho okusebenzisela ukucabanga, ukukhumbula nokuthatha isinqumo. Iqukethe okuqoshiwe kwakho konke okwenzeke kuwe kusukela ekuqaleni kwempilo yakho kuze kube manje. Ngokuqoshiwe sisho ikhophi ngqo yento.
Ingqondo yakho iqopha yonke imicabango yakho, iziphetho, izinqumo, okubonile kanye nemibono (izinto umuntu aqaphela ngazo ngezinzwa). Isibonelo, ungakhumbula isikhathi lapho kwenzeka okuthile ngenkathi useyingane. Ingqondo yakho iqukethe inkumbulo yalesosikhathi, okuwukuqoshwa kwezinto ozibonile, wezwa futhi wazizwa, iziphetho oweza kuzo kanye nanoma yiziphi izinqumo ozenzile lapho kwenzeka.
Lokhu kuqoshwa kubizwa ngokuthi yimifanekiso yezithombe zengqondo. Izithombe zesithombe sengqondo ziyimibala yezithombe ezinomsindo nephunga nayo yonke eminye imibono, kanye neziphetho noma imibono yomuntu. Lezi zithombe zinokuphakama, ububanzi nokujula.
Isibonelo, umuntu ukhumbula edla isidlo sasekuseni ekuseni. Iningi labantu, lapho likhumbula le nkumbulo, libona isithombe sengqondo sesithombe setafula, ukudla kanye negumbi. Bebezobona emqondweni wabo umbala wendwangu yetafula nezinto kanye nabantu abasegumbini. Uma ikhono labo lokukhumbula lilihle, bazokwazi nokuhogela ukudla futhi bezwe amazwi abanye abasetafuleni lesidlo sasekuseni.
Ukube bebenqume ukuba nenye inkomishi yekhofi, bebezokhumbula benza isinqumo sokuthatha inkomishi yesibili.
Yonke lemibono yaleyo mzuzu iyingxenye yesithombe somqondo.
Lezi zithombe zengqondo zikhona ngezinga lokwazi, okusho ukuthi umuntu uyazazi uma zenzeka futhi angazikhumbula ngemuva kwalokho. Kodwa ke, izithombe zemifanekiso yengqondo zikhona futhi zezinto ezenzekile lapho umuntu okwengxenye noma engazi ngokuphelele. Lezo zithombe zengqondo zikhona ngezansi kokuqashelwa komuntu. Akazi ukuthi zikhona futhi akakwazi ukuzikhumbula ngokuthanda kwakhe.
Ukwenza isibonelo, umuntu uqhuzuka ikhanda lakhe odongeni. Yize noma engalimali kakhulu futhi eselulama ngokushesha, bekunesikhashana sobuhlungu nokungazi lapho ikhanda lakhe lishayisa udonga. Isithombe somqondo salowo mzuzu, siqedile ngayo yonke imibono, siqoshwa engqondweni yize singaphansi kokuqonda kwakhe.
Eminye yemiphumela yokuthatha izidakamizwa ukwenza umuntu angazizwa. Izinga angazizwa ngalo lingaba likhulu noma lincane. Kepha umuntu ongaphansi kwethonya lesidakamizwa akaboni ngokuphelele ukuthi kwenzekani eduze kwakhe.
Ukwenza isibonelo, ake sithi umuntu uthathe isidakamizwa i-LSD. Lesi isidakamizwa esinamandla esenza umuntu azizwe sengathi umhlaba omzungezile uhlukile. Sishintsha indlela azwa ngayo isikhala nesikhathi. Kungenzeka futhi abe okukhohlisa, okuyizinto ezibonakala zingokoqobo kuyena ngaleso sikhathi kodwa ezingekho empeleni. Ngenkathi engaphansi kwethonya lesidakamizwa, umuntu akanangqondo ngokuphelele. Akazazi ngokuphelele izinto ezimzungezile. Kepha ingqondo yakhe ibisazokuqopha konke njengoba kwenzekile futhi kuzobe kuqukethe izithombe zesithombe sengqondo nakho konke okwenzeka, kuqediwe ngokubona, ukuhogela, imizwa, imisindo, njll., lokho okwenzeka.
Masithi uthathe i-LSD kwi-rock concert engaphandle ngosuku olushisayo lwasehlobo. Wathola ukuthinteka okuningana ngokuthatha isidakamizwa. Izinga lokushaya kwenhliziyo yakhe landa nemizwelo yakhe yaqhubeka nokushintsha. Wabuye wezwa isicanucanu ngenxa yephunga lentuthu kagwayi eduzane. Ngesinye isikhathi phakathi nosuku wahlukaniswa nabangane bakhe, wethuka futhi wazizwa ekhathazekile. Wabuye wadukiswa, imibala “yokuzwa” nemisindo “yokubona.” Umqondo wakhe ubuzoqukatha izithombe zesimo sengqondo nezipiliyoni zosuku lonke, kufaka phakathi izinkohliso ezibangelwe yi-LSD.
Izithombe ezingokwengqondo ezivela kwizipiliyoni zalolo suku zingamthinta ngokuzayo njengoba nje kwenza ngenkathi ethatha isidakamizwa. Uma, ngolunye usuku, indawo emzungezile yayiqukethe ukufana nesikhathi ethatha i-LSD, izithombe zesithombe sengqondo zingaqala ukusebenza futhi. Lokhu kwaziwa njenge-restimulation, inkumbulo edlule ivele isebebenze ngenxa yezimo ezikhona njengamanje ezifana nezimo zesikhathi esedlule.
Engaba ngaphandle ngosuku olushisayo futhi ezwe umculo omnandi udlala. Othile oseduzane angakhanyisa ugwayi bese eshaya intuthu kwinkomba yakhe. Inhliziyo yakhe ingahle iqale ukujaha futhi kungenzeka azizwe enesicanucanu. Angazizwa ekhathazekile ngaphandle kwesizathu esisobala. Angaphinde azwe nokukhohliswa kwemibala ethi “ukuzwa” imibala “nokubona” ​​imisindo. Akasathathanga isidakamizwa futhi. Kepha izithombe zengqondo zi-restimulated.
Kulesi sehlakalo bekuyimicimbi ezungeze lendoda ebangele i-restimulation. Kepha ikhona enye indlela lapho kungenzeka khona i-restimulation.
Izinsalela zezidakamizwa (amanani asele ngemuva kokusetshenziswa) zihlala emzimbeni isikhathi eside ngemuva kokuba umuntu ethathile isidakamizwa. Lezi zinsalela zezidakamizwa iyahlala, okusho ukuthi zihlala zilungisiwe noma zinamathele, kwizicubu ezinamafutha zomzimba. Kamuva, ziyakwazi ukudalulwa ziphinde zibuyele emsebenzini egazini, okwenza umuntu ezwe kabusha imiphumela efanayo.
Thatha futhi isibonelo somuntu owathatha i-LSD. Esikhathini esithile kamuva—mhlawumbe iminyaka kamuva—izinsalela zesidakamizwa esisemzimbeni wakhe zingadala i-restimulation yalokho okwenzeka lapho ezithatha. Uhlangabezana nemizwa efanayo yenhliziyo ejahayo, isicanucanu kanye nokukhathazeka. Vele, akazi ukuthi kungani. Angahle abone izithombe zengqondo zabantu ayenabo nokubona nemisindo kanye nokunuka kusuka kulesi sigameko. Futhi, akakathathi isidakamizwa futhi. Kepha le-restimulation engenzeka futhi nafuthi, inciphisa ukuqaphela kwakhe kanye namakhono akhe. Kungashintsha ngisho nokubi kwesimo sakhe sengqondo kuyena kuye nakwabanye.
Ukuqoshwa okuqhubekayo kwezithombe zezithombe zengqondo ngempilo yomuntu kubizwa nge-time track. Kwenziwa izehlakalo zomzuzwana owodwa umuntu abhekana nazo njengoba edlula empilweni. Kodwa ke, umuntu othathe izidakamizwa unemifanekiso yezithombe zengqondo hhayi nje kuphela ngalokho okwenzeka endaweni emzungezile lapho ethatha lesi sidakamizwa kodwa futhi nalokho abhekana nakho njengomphumela wokuthatha isidakamizwa. I-Time track yakhe ngenkathi engaphansi kwethonya lezidakamizwa idideke kakhulu. Isibonelo, izithombe zesithombe sengqondo sokuhlangenwe nakho komuntu ngemuva kokuthatha i-LSD kuzobandakanya okukhohlisayo kanye nemicimbi empeleni ebiqhubeka imzungezile ngaleso sikhathi.
IZIDAKAMIZWA NESIKHATHI SAMANJE
Abantu ngaphansi kwethonya lezidakamizwa banezikhathi ezingenalutho emnqondweni nezinkohliso. Ngenxa yalokhu, othatha izidakamizwa akekho “esikhathini samanje.”
Isikhathi samanje sisho manje, noma izinto ezenzeka manje. Umuntu onobuhlakani futhi ojabule ukunaka kwakhe kusesikhathini samanje futhi uyakwazi okumzungezile.
Uma umuntu ephila impilo engathandeki, angaba nomuzwa wokuthi isikhathi samanje sibuhlungu kakhulu ukubhekana naso. Ngakho ke udla izidakamizwa ukuze akugweme. Isibonelo, angaphuza utshwala ukuze “akhohlwe” ngezinkinga zakhe. Lokhu kumkhipha esikhathini samanje futhi kumenza angazi kangako ngakho ke akakwazi ngokuphelele ukuthi kwenzekani eduze kwakhe.
Inkinga ukuthi othatha izidakamizwa akabuyeli emuva kwesikhathi sokufika esikhathini samanje yize umphumela wesidakamizwa ubonakala usuphelile. Ngakho ke, khona lapho phambi kwamehlo akho, ngokusobala egumbini elifanayo okulona, empeleni ulapho ngokwengxenye kuphela futhi nangokwengxenye kwezinye izehlakalo ezedlule. Umbono wakhe walokho okwenzekayo manje uhlanganiswa nezithombe zezithombe zengqondo kusuka ngaleso sikhathi, lapho ayengaphansi kwethonya lezidakamizwa.
Uma usho okuthile kuye, uzozama ukukufaka kulokho akubonayo. Lokho kungahle kungafani nalokho okuqondayo. Ngenxa yalokhu, izenzo zakhe zingabonakala zingajwayelekile noma zingenangqondo.
Masithi uhlanza phansi futhi usizwa ngumuntu obesebenzisa izidakamizwa. Osebenzisa izidakamizwa angaqiniseka ukuthi ukusiza ukulungisa iphansi elidinga ukulungiswa. Kepha uhlanza phansi, awulilungisi. Ngakho ke lapho umcela ukuba akuphe i-mop, ucabanga ukuthi usho ukuthi “ngiqhubele isando.” Ngakho ke uthatha i-mop, ecabanga ukuthi ngempela yisando, futhi uzama ukukunikeza yona. Kepha i-mop ihlukile kwisando. Isibambo sikude futhi isisindo sayo nokuma kwayo akufani. Ngakho wehlulela umzamo odingekayo wokukunika yona futhi uwisa ibhakede lamanzi olisebenzisa ukuhlanza phansi.
Ngoba umuntu othatha izidakamizwa akekho esikhathini samanje, uvame ukwenza amaphutha alolu hlobo. Kungaba ngamaphutha amancane amenza abonakale exakile, njengokugxoba ibhakede lamanzi. Okubi kakhulu, umuntu angaba uhlanya. Imicimbi ebonakale kuye yehluke ngokuphelele kunalena ebonakalayo komunye umuntu.
Ngokubona kwakhe, nokho, abanye abantu yibona abayiziphukuphuku noma abangenangqondo. Njengoba bona bengavumelani ngezenzo zabo nalokho akubonayo kwenzeka, “bona” abanangqondo. Isibonelo: Abantu abaningana bahambisa ifenisha. Kubo bonke ngaphandle kwakhe bamane nje bahambisa ifenisha. Uzibona “ehambisa ama-shapes efwini.” Kanjalo ke “wenza amaphutha.” Njengoba abanye bengaboni ngaphakathi kuye futhi bebona omunye umuntu onjengabo, abaqondi ukuthi kungani eqhubeka enza amaphutha.
Lawa maqiniso achaza ukuziphatha okungajwayelekile komuntu osebenzisa izidakamizwa. Sonke siyabazi abantu abanjalo. Ukubhala okungazelelwe okungenzi umqondo, okungahlangene nalokhu okukhulunywa ngakho; ukugqolozela okungenalutho lapho enikezwe umyalo noma amazwi—ngemuva kwalawa kulele izwe elihlukile ahlala kulo.
Umuntu onjalo usongela ukusinda hhayi okwakhe kuphela, kodwa kwanoma yiliphi iqembu, noma ngabe ngumndeni, ibhizinisi noma isizwe.
Imiphumela emibi yezidakamizwa ke iqhubeka isikhathi eside umuntu esezisebenzisile. Umphumela ungaba yingozi kwabanye abaningi ngaphandle komsebenzisi. Futhi, akuzona izidakamizwa zasemgwaqweni ezingekho emthethweni kuphela eziyinkinga. Izidakamizwa zokwelashwa ezisetshenziselwa ukusiza abantu babe nemiphumela efanayo lapho behlukunyezwa.
Odokotela nabanye banquma ama-painkillers anjenge-aspirin, ama-tranquilizers nama-soporifics (noma umuthi owenza umuntu alale) ngesifiso esiqondakalayo sokudambisa izinhlungu.
Kodwa ke, akekho owazi kahle ukuthi lezidakamizwa zisebenza kanjani noma zenzani. Ukwakheka kwezidakamizwa ezinjalo (ezenziwe ngokuhlanganisa izinto ezahlukahlukene) kuvela ekutholakaleni ngengozi ukuthi “lokhu kunciphisa izinhlungu.”
Lezi zidakamizwa zivame ukuba nemiphumela emibi kakhulu.
Ake sithi umuntu wanikezwa isidakamizwa ukuze anciphise izinhlungu noma ukungakhululeki. Lapho isidakamizwa siphela emzimbeni noma siqala ukuwohloka, izinhlungu noma ukungakhululeki kuba kumbi kakhulu. Enye yezimpendulo umuntu anazo ngalokhu ukuthatha izidakamizwa ezingaphezulu. Yena unomuzwa wokuthi kufanele athathe okungaphezulu ukuze asuse izinhlungu nokungakhululeki neminye imizwa engafuneki. Kepha njengoba eqhubeka nokuzidla, uyehluleka ukuzizwa kahle, udinga izidakamizwa ezengeziwe.
Kujwayelekile futhi ukuthi umuntu odla izidakamizwa ajabule kakhulu kwezocansi ekuqaleni. Kepha ngemuva “kokukhishwa” kocansi ekuqaleni, umuzwa wokuya ocansini uba nzima futhi kube nzima ukuwufeza. Umuntu uzama kaningi ukuwufeza kepha akunelisi kakhulu.
Abantu bathatha izidakamizwa ukuvikela imizwa engafuneki. Kodwa kunemizwa eminingi efiselekayo empilweni futhi. Izidakamizwa zivimba yonke imizwa zize zivimbe nemizwa efiselekayo.
Ukuphela kwento enhle engashiwo ngezidakamizwa ukuthi zinikeza ukukhululeka kubuhlungu (ubuhlungu obukhulu bomzimba noma bengqondo) isikhashana. Uma umuntu elimele kabi kakhulu, lokhu kuvumela odokotela ukuthi benze ukulungiswa okudingekile. Kepha umuntu okwaziyo ukuthi kwenzekani eduze kwakhe futhi enekhono kulokho akwenzayo cishe akakwazi ukuzilimaza. Umuntu odla izidakamizwa akayazi indawo emzungezile futhi ulahlekelwa yikhono lakhe eliningi. Ngakho ke izidakamizwa zenza kube lula ukuthi umuntu azilimaze. Ngemuva kwalokho zimvimbela ekutholeni kabusha ukuqonda nekhono elizomgcina ephephile.
Noma ngubani unokukhetha empilweni phakathi kokuzizwa “ufile” ngezidakamizwa noma ukuzizwa uphila ngaphandle kwazo. Izidakamizwa ziphanga impilo yemizwa nenjabulo okuyizona izizathu kuphela zokuphila.